ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန် ရှေ့နေကြီး ဦးသန်းတင်ရဲ့ အမြင် … | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန် ရှေ့နေကြီး ဦးသန်းတင်ရဲ့ အမြင် …
ရန်ကုန် ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် နှင့် ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေရှုထောင့် အမြင်ဖြင့် သိရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အသက် (၉၂)အရွယ် ရှိပြီ ဖြစ်သော တရားရုံးချုပ် လွှတ်တော်ရှေ့နေကြီး ဦးသန်းတင်အား M-Media မှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
“ဒီ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်တွေဟာ ဟိုးအင်္ဂလိပ်ခေတ် လက်ထက်အရင် ဗမာဘုရင်တွေ လက်ထက်ကတည်းက ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။ ရှေးနှစ်ပေါင်းရာကျော်က ရှိခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမွေ အနှစ်တွေ ပါ။ “သာသနာရောင်ဝါ ထွန်းပြောင်စေဖို့”ဆိုတဲ့ ပြည်မြန်မာက ထုတ်တဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ဗမာဘုရင်တွေ လက်ထက်က အစ္စလာမ် မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ရှိလာပုံ ဆိုတာကို အတိအကျ ရေးထားတယ်။ အဲဒီရာဇ၀င် စာအုပ်ထဲမှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေက မြန်မာပြည်ကို စောပြီးရောက်တယ်လို့ ပေးထားတာကို တွေ့ရတယ်။ မင်းတုန်းမင်းကြီးက ရတနာပုံ နေပြည်တော်ကို မြို့တည်တဲ့ နေရာမှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ အတွက် ဗလီဆောက်ဖို့ ၀င်းကြီးတွေ ချပေးပြီးတော့ ဗလီ အသီးသီး ဆောက်လုပ်ခွင့် ပေးခဲ့တယ်။ ဘုရင်ကြီးက မန္တလေး နန်းတည်ခဲ့ရုံသာမက နန်းတော်အတွင်းမှာပါ ရွှေပန္နဗလီကို သူကိုယ်တိုင် ပန္နတ်ချပြီး သူရဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် စစ်သည်စစ်သားတွေ ငါးကြိမ် လွယ်ကူစွာ ၀တ်ပြုနိုင်ဖို့ အတွက် ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါတင်မကဘူး သူရဲ့ တိုင်းသူပြည်သား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ တစ်နှစ်တစ်ခါ မက္ကာရွှေမြို့တော်ကို ဘုရားဖူး သွားတဲ့ အခါ အဲဒီမှာ မြန်မာ မွတိစလင်တွေ တည်း ခိုနေ ထိုင်ဖို့ အတွက် သူ့ရဲ့ လူယုံတော်တွေကို လွှတ်ပြီး ဒေါင်းဇရပ်ကြီးကို ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။”
“မြန်မာဘုရင်တွေ လက်ထက်ကတည်းက အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ ဆွလာဟ်ဝတ်ပြုဖို့ ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဗလီ ၀တ်ကျောင်းတော်တွေ ဖြစ်တယ်။ နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ် လက်ထက်မှာလည်း ဒီဗလီ ၀တ်ကျောင်းတော်တွေ တည်ရှိတယ်။ အချိန်မှန် ၀တ်ပြုနေတယ်။ ဒီဗလီတွေဟာ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းရမယ်။ ဦးနု အစိုးရ လက်ထက်တုန်းက ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ကို နိုင်ငံတော် ဘာသာအဖြစ်ကြေညာတဲ့ အခါမှာ တိုင်းရင်းသား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် လူနည်းစုများ အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့ ကန်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာရေးကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ် ပိုင်ခွင့် ဆိုတာ ရှိတဲ့အတွက် ဟိုးအရင်ကတည်းက ဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့ အမွေအနှစ် အဆောက်အဦးတွေကို အစိုးရက ထိန်းသိမ်းခဲ့တယ် ဆိုတာ ရှိတယ်။ အခုလည်း နှစ်ပေါင်း ရာကျော် သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ ဒီအမွေအနှစ်တွေကို သူတို့ ဖျက်ချင်တိုင်း ဖျက်လို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ဒီအမွေအနှစ်တွေကို ခံစားပိုင်ခွင့် ၊ ရပိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ ဆောက် လုပ်ခွင့် ပေးစရာ မလိုအောင် ဒီဗလီတွေဟာ ဘုရင်တွေ အင်္ဂလိပ်ခေတ် လက်ထက်ကတည်းက ဆောက်ခဲ့တာပါ ”
‘ကမ္ဘာကပေးတဲ့ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် အခွင့်အရေးတွေ ရှိတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး ရှိတယ်။ ဒါတွေကို ချိုးဖောက်ရင် ကမ္ဘာကို ဆန့်ကျင်တဲ့ သဘောရောက်တယ်။ ကမ္ဘာဥပဒေကို လိုက်နာရင် ဗလီတွေကို လိုက်ဖျက်စရာ မလိုဘူး။ ဗလီတွေကို ဖျက်ပေးရမယ်လို့ ပြောလာရင်လည်း ဘာသာရေး အမွေအနှစ် ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါကြောင့် မဖျက်ပါနဲ့လို့ ဆိုပြီး အဖွဲ့ကြီးငါးဖွဲ့ကနေပြီး သူတို့ကို နို့တစ်စာပေးပြီး တရားရုံးမှာ ရင်ဆိုင်ရင် ကောင်းမယ်။ ပြန်ပြီး တရားစွဲရမယ်။ တရားမစွဲရင် တာဝန်ကျေမှာ မဟုတ်ဘူး။ ရမည်းသင်းမြို့က ဗလီကြီးဆိုရင် ဗမက ရပ်ကွက်ဆိုပြီး ရှိတဲ့ သမိုင်းဝင် မြို့မှာ ရှိတဲ့ ဗလီ ဖြစ်တယ်။ ဗမက ဆိုတာ ဆရာကြီးဦးရာဇတ်တို့ ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ဗမာမွတ်စလင်ကွန်ဂရက် ဖြစ်တယ်။ ဗမာ မွတ်စလင် လှုပ်ရှားမူရဲ့ သမိုင်းဝင် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို နိုင်ငံတော် ဘာသာလုပ်မယ်လို့ အကြံပြုချက်ကို ဗိုလ်ချုပ်က “ဟာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကို လွတ်လပ်ရေးရအောင် တိုက်တဲ့ အချိန်မှာ မွတ်စလင်တွေလည်း ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေ ပါတယ်။ ဟိန္ဒူတွေလည်း ပါတယ်။ အခုကျမှ ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ခုတည်းကို နိုင်ငံတော်ဘာသာ လုပ်ရမယ်ဆိုရင် မတရားတဲ့အတွက် လုံးဝ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ဆိုရှယ်လစ် နဲ့ သွားမယ်ဆိုပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ပယ်ချပြီးတော့ တိုင်းပြည်မှာ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေး အတွက် အလွဲသုံးစား မပြုရ ဆိုပြီးတော့ စည်းမျဉ်းလုပ်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ၁၉၄၇-ခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေးမှာ အတိအကျ ပေးခဲ့တယ်။ နိုင်ငံသားတွေကို အခွင့်အရေး ပေးခဲ့တယ်။”
“အခု ကျွန်တော်တို့ အစ္စလာမ်သာသာဝင်တွေဟာ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးနေတယ်။ ဗိုလ်သင်တန်း ဆိုရင်လည်း မြန်မာမွတ်စလင်တွေ တက်ခွင့်မရဘူး။ တဖတ်သတ် အနိုင်ကျင့်ပြီး လုပ်နေတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ၂၀၀၈-မှာ နိုင်ငံတော်မှာ ဘာသာကြီးလေးရပ် ရှိတယ်လို့ အသိအမှတ်ပြုထားတယ်။ အဲဒါကို ပယ်ဖျက်ပစ်လို့ မရဘူး။ ကမ္ဘာအပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ကို ဆန့်ကျင်ရာရောက်ရင် ကမ္ဘာမှာ မျက်နှာမလှ ဖြစ်မယ်”ဟု M-Media ရဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
This entry was posted on April 6, 2013, in အင်တာဗျူး, အထူးကဏ္ဍ, ဆောင်းပါး, ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← မိတ္ထီလာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်သူတချို့ကို မကြာခင် ရုံး တင်မည်
ဂျင်မီကာတာ ရန်ကုန်မှာ လူထုဟောပြောပွဲလုပ် →